Sokajian’izy ireo ho fandikan-dalàna sy fanalam-baraka ary ny herisetra ara-tsaina sy ara-batana, izay miendrika fitsaram-bahoaka no natao tamin’io solontenam-panjakana teo am-panatanterahana ny asany. Nambaran’izy ireo fa fanosihosena ny fahefam-panjakana sy ny fanivaivana ny antokon-draharahan’ny Administrateurs Civils, izay miendrika fitsaram-bahoaka ary manohintohina ny fizotry ny fifidianana. Mitaky ny handraisan’ny Fanjakana fepetra hentitra amin’ireo rehetra tompon’antoka tamin’iny raharaha iny, izay ahitana olona natao hampihatra sy hampanaja ny lalàna ary hitaiza ny olom-pirenena, hoy ny SYNAD. Mangataka ny Fanjakana hamoaka ao anatin’ny fe-potoana ara-drariny ny hoenti-manana amin’ny fampandehanan-draharaha amin’ny fifidianana mba hisorohana ny trangan-javatra mampalahelo toy izao, hoy izy ireo. Nosamborina noho ahiahina kolikoly izy io, ary kandida miisa 12 no niara-nitory, raha ny voalazan’ny fampahalalam-baovao samihafa, izay nodisoan’ny mpitandro ny filaminana.